Vonona ho amin'ny ady an-trano ve isika? Are we ready for a civil war? Sommes-nous prêt pour une guerre civile? | Hevitra MPANOHARIANA
Vonona ho amin'ny ady an-trano ve isika? Are we ready for a civil war? Sommes-nous prêt pour une guerre civile?
2009-02-13 @ 08:24 in Politika
Niandry aho ka niandry, tsy nisy mpamaham-bolongana Malagasy nitantara ny teny Mahamasina tamin'ny 11 febroary 2009 afa-tsy iray na roa monja. Rehefa mandinika anefa aho dia mihevitra fa noho ny filazan'ny teny amin'ny kianjan'ny 13 mey ny talata 10 febroary 2009 manao hoe ny mpamosavy faly amin'ny fahafatesan'ny mpiray tanindrazana aminy no mankeny, tsy mahandry ny andro alina hifaliana sy hanaovan-dratsy fa te-hiseho masoandro amin'izay, tsy matahotody, mpiray petsapetsa amin'ny mpamono olona... idiran'ny fanahin'i Satana raha mankeny Mahamasina no mety ho nampihemotra ny mpamaham-bolongana tsy hankeny ny andron'io Alarobia 11 febroary 2009 teo.
Fa enga anie ho diso aho fa tsy noho ireo velively tsy akory, fa noho ny orana nirotsaka aloha voalohany indrindra nefa dia tena fotaka ny teny an-toerana na dia ny teo am-pidirana monja aza araka ny voalazan'izay nankeny (tsy tany aho noho ny "tsy fahasalamana" fa nanala faravazana indrindra ny marainan'io andro io). Izay tonga aloha nahazo ny tribunes laterales sy ny ambonin'ny tribunes centrales no nahazo ny toerana mety azo ipetrahana fa izay taratara kosa, na dia nahazo ny gradins aza dia tsy afa-mipetraka velively fa mitsangana avokoa. Efa nihoatra izay noheverina avy hatrany kosa ny fahatongavan'ny olona raha ao nanomboka nameno ny bozaka eo afovoany ny olona... indrindra fa tsy nitsahatra ny nifafy ny oramadinika dia tsy nisy an-kiala izany eo. Ny tena nampitolagaga, na dia tamin'ny iray ora sy sasany folakandro tokony hialan'ny olona tsikelikely eny an-toerana hamonjy ny toeram-piasana aza dia mbola maro hatrany ny nitanjozotra hiditra ny kianjaben'i Mahamasina.
Faharoa, somary antenantenan'andro ihany ny fotoana nefa mba manana anton'asa ihany ny olona tokony hankeny Mahamasina ka raha tsy manana faharesen-dahatra lehibe tsy hankeny izany velively. Ny tena nahavariana ahy aloha dia betsaka ny vehivavy no nandefa sms sy niantso ahy hankeny Mahamasina ny marainan'ny 10 febroary (fa iza moa no nilaza tamin-dry zareo fa mpanohana ny ara-dalàna sy manohitra ny fanakorontanana aho?)ary nilaza fa na hisy inona na hisy inona tsy maintsy ho tonga eny izy. Inona angaha no antony? efa ela loatra no nangetaheta ny haneho ny safidiny ampahibemaso izy ireo ka na ho vitsy ny tonga eny na ho maro dia tsy maintsy ho tazana eny Mahamasina no anarany. Misy ihany koa, manana olona akaiky toy ity aho, niandry io fotoana io hanehoany ampahibemaso fa manohitra izay fanakorontanana sy fandrobana ary fandoroana fananam-panjakana ataon'ny tariky ny TGV izy. Mazava loatra fa nifidy TGV izy ho fampitandremana (avertissement) ataony amin'ny fanjakana tamin'ny fifidianana ho Ben'ny tanàna ny 16 desambra 2007 nefa moa ratsy fitontona any amin'ny mpandrava efa ny vato narotsany.
Ary ny fahatelo farany, hitantsika eny ihany fa vitsy an'isa izahay tsy matahotody manaraka ny ara-dalàna sy ny voalazan'ny lalam-panorenana na dia lalàna tsy tonga lafatra aza ny lalàna miasa ankehitriny hoe amin'ny 2012 vao fotoanan'ny fanoloana izany filoham-pirenena izany fa tsy amin'izao fotoana izao, raha firenena mbola te-hiara-miasa amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena sy ny banky mondialy ihany koa... efa manana ny safidiny ny maro amin'ny mpamaham-bolongana Malagasy fantatra ka naleony manao ho toy ny tsy misy izay fihaonamben'ny mpiray kopaka isasahana amin'ny mpandripaka vahoaka any. Eto tokoa no tena ahatsapana fa tolona politika ihany koa izany mampita vaovao izany... hany ka nanapa-kevitra aho fa raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tonga eny amin'ny kianjaben'i Mahamasina aho hanampy isa ny mpamosavy mandeha atoandro eny na dia mety hiala mialoha noho ny asa tsy maintsy vitaina amin'ny Asabotsy 14 febroary 2009 hoavy izao. Tsy hieritreritra izay mety hamaroan'isan'ny mpanohana ny eo amin'ny kianjan'ny 13 mey aho fa hanampy isa ny tsy vanona sy tsy valahara. Enga anie mba samy hamory vahoaka ny roa tonta amin'io fotoana io.
Misy zavatra vitsivitsy ambara kely ihany aloha fandrao mbola tsy mahalala ianareo, fa groupe no nandefasana ny fanamafisam-peo teny Mahamasina... hany sisa nanaiky satria ny hafa rehetra dia natahotra ny fampihorohoroan'ny Terroristes Guerriers Vandales avokoa ka naleo nitandrina. Izany no antony namparofirofy ny fanamafisam-peo nampitaraina ny maro nanatrika teny Mahamasina teny. Tamin'ity fotoana ity ihany koa no nahatsapana tsara ny fihevitry ny mpitolona nanohitra ny fandehanan'ny olona hankeny Iavoloha tamin'ny 10 aogositra 1991 ka nalaza tamin'izany ny MFM nisoloan'i Constant Raveloson tena teo Mahamasina. Ny nahavariana ahy kely dia izao, nitolona aho tamin'ny 1991, anisan'ny nitarika ny tolona ny MFM na dia nisintaka aza avy teo. Nisy tolona ihany koa tamin'ny 1994 tany ho any, tsy tao aho fa ny an'ny MFM kosa dia Germain Rakotonirainy no nitarika izany... fantatra anefa fa nisy tsi-fitovian-kevitra ihany teo amin'ny MFM tamin'io fotoana io. Dia samy niaro ny safidim-bahoaka ihany koa na izaho na ny MFM tamin'ny 2002. Ankehitriny, 2009 samy mpiaro ny ara-dalàna sy manohitra ny fanakorontanana na izaho na ny MFM. Nefa aho tsy mba MFM velively (ary tsy ao amin'ny antoko TIM araka ny endrikendriky ny hafa ihany koa).
Zavatra hafa ihany koa, tsy fantatro aloha na efa nisy fampahalalam-baovao nilaza na tsia teto amin'ny serasera fa nisy nikasa ny handroba tany Toliary tany androany 12 febroary 2009, nefa ataoko fa voafehy ihany ny toe-draharaha avy eo. Rehefa avy eo moa dia fantatra fa nitifitra ny vahoaka MPANDROBA tsy tao anatin'ny "zone rouge" indray ny miaramila tany ka roa no maty tamin'izany. Ho heno ihany moa ny fomba filazan'ny eo amin'ny kianjan'ny 13 na mpitolona avy ao aminy ireny na tsia. Nanaitra ihany anefa ny fitarainan'ny loholona voafidy sy voatendry avy any fa misy ny mikononkonona ady an-trano (fomba filaza ampahibemaso ny hevitra ambadiky ny fikonokononana fandrobana fa ankehitriny kosa tadiavina hanaovana fandripahana ny Merina - sy ny Betsileo - monina any amin'iny faritra iny). Efa nisy anefa ny olona milaza (na mieritreritra) fa tena ao anatin'ny teti-panorona mihitsy io fandripahana olona toy izay nitranga tany Rwanda namonoan'ny Hutu ny Tutsi tamin'ny 1994 io. Ny tsikaritro manko (tsy naheno Audio aho na video fa ny kabarin-dRatsiraka tao amin'ny iarivo-town no hitako) dia ninian-dRatsiraka noadinoina ny nanonona an'Antananarivo nefa voalazany avokoa ny faritany dimy hafa, tsy zava-bitika veliely io amiko.
Ankoatra izay, izay nandalo an'i Tsaralalàna androany 12 febroary 2009 folakandro dia mety ho gaga fa nosakanan'ny polisy ny lalana mitsofoka an'i Tsaralalàna rehetra ankoatra an'i Petite vitesse sy iny manamorona ny Anjary Hotel mankeny amin'ny Conforama iny. Hay moa ka misy mikasa ny hiditra an-keriny ao amin'ny Hotel de Police, tsy fantatra loatra izay tena tanjony na handroba basy na hanao io Hotel de Police io ho toeram-piasan'ny Minisitry ny filaminana anatin'ny "fitondrana tetezamita". Soa ihany fa mivonona ny tsy hanaiky izany ry zareo ao.
Fa dia nanao fanentanana sy nanao fanazavana ary ny Jeneraly Ramakavelo Désiré Philippe izay mpanohana mavitriky ny TGV ny amin'ny tsy fisian'ny "sommation" teny Ambohitsorohitra tamin'ny Sabotsy 7 febroary 2009 teo ka nandripahana olona maro. Tsy vitsy tamin'ny mpanohana ny filoha Ravalomanana no nahatsiaro avy hatrany fa Minisitry ny fiarovana rangahy io tamin'ny 1992 nisian'ny fanatanterahana ny forum national ka dia karazan'ny nampitifitra an'i Monja Jaona, naratra tamin'io fotoana io, ka nahafaty an'i Laha Gaston ihany koa, teny amin'ny CEMES soanierana io nefa "vahoaka" no nentin'ireo mpitolona ireo, ary tsy tafiditra tanatin'ny "zone rouge" akory ny tariky Monja Jaona no notifirin'ny miaramilany tamin'ny 31 marsa 1992... Koa dia miandry ny valintenin'ny Jeneraly Ramakavelo izahay ny amin'ny fanazavany na ny fitolorany ny tenany hotsarain'ny tribonaly iraisam-pirenena araka ny nambarany. Marihiko eto fa nitondra fankahalana an'Antananarivo sy ny Merina izay nifidy azy ho depioten'Antananarivo renivohitra tao am-pon'i Monja Jaona mandra-pahafatiny iny fitifirana azy teny amin'ny CEMES iny... ka nitsetra azy no nataona'Antananarivo fa tsy nankahala azy velively nefa raha izay moa no lasa dikan'ny fitiavan-tanindrazana tao aminy tao (enga anie ho diso izany eritreritro izany)?
Eo ihany isika dia nieritreritra ny amin'ny nahafaty an'ilay mpaka sary manao gazety Ando Ratovonirina aho. Ahoana no mety ho nahafaty azy? Namaky gazety aho ka ny novakiako dia hoe efa nihataka an'ireo miaramila mpiambina ny lapa ny Jeneraly Dolin Rasolosoa ary efa nandre soa aman-tsara ny filazana fa hitifitra ry zareo. Mbola nihazakazaka hamonjy azy ihany anefa ity mpanao gazetin'ny rta ity, hoy ny iray amin'ny mpiara-miasa aminy, hanontany zavatra aminy. Tsy fantany ny loza mananontanona azy satria, mahafantatra ny paipaika miaramila na paipaikan'ny fiarovana ny jeneraly Dolin amin'izy izany efa miaramila Jeneraly izany. Mety ho nahatsikaritra fihetsika fanao anaty paipaika fanaon'ny miaramila sy ny mpitsikilo ny Jeneraly Dolin nefa fantany mazava fa mety ho efa anatin'ny kendrin'ny mpitifitra ny tenany (mariho tsara ho an'izay mbola te-hijery fa niditra tamin'ny teti-panoron'ny fihemorana (strategie de repli) ny tao amin'ny Emmo nat ka izay nahita ny baiko dia nahita fa lalana iray no nandehanan'ny zandary sy miaramila nanao barazy teo amin'ny ONE sy ny Shoprite teo aloha. Haingana be ny fandehan'ny raharaha (raha ekena ho marina ny nolazain'ny gazety noakiako ity) hany ka ny bala tokony ho an'ny Jeneraly Dollin no azon'i Ando. Izany hoe, tsy tsapan'i Ando akory fa efa lasa "bouclier humain"-n'ny Jeneraly Dollin ny tenany. Fihevitro ihany io fa tsy fantatra marina moa izay tena nitranga teny.
Mbola hiverina resaka "sommation" ihany. Nanao ny fepetra araka izay tratrany ny mpiambina ny RNM sy ny TVM tamin'ny 26 janoary 2009, nandefa ny grenady ny miaramila fa vao maika naharomotra ny "vahoaka" izany (izay teny manamarina na nisy tifi-danitra teny Anosy na tsia?). Hany herin'ny mpitandro ny filaminana tao niala am-pilaminana satria tratran'ny be noho ny vitsy sady ny aina lahitokana ny tena tsy nahazo alalana hitifitra. Tadidio ihany koa fa lasan'ny mpitolona avokoa ny basin'ny mpitandro ny filaminana rehetra rehefa nahasahy nitifitra izy ireo nefa tsy ampy bala raha nankeny Anosipatrana MBS ny mpitolona ka nananga-tanana ho fibabohana ny mpitandro ny filaminana rehetra tao izay Malagasy avokoa fa tsy nisy mpikarama an'ady vahiny tsy akory. Noho izany, ny barazy tenany nataon'ny miaramila sy ny zandary nandritra ny fotoana maharitra sy ny fifampiresahana maharitra nataon'ny solontena dia efa "sommation" tenany satria tsy misy zavatra tsara tahaka ny fifampidinihana anie e! Tadidio tsara anefa ny tenin'ilay kolonely mpifehy ireo mpitandro ny filaminana ireo tamin'ny Jeneraly Dollin hoe tsy misy antoka intsony ny ainareo raha vao mihoatra eto ianareo. Avy teo nandray ny fanamafisam-peo ny Jeneraly Dollin hoe "namantsika ireo miaramila ireo" fa noadinoiny ny nilaza hoe "raha vao mihoatra ireo ianareo dia mety ho voatifitra" satria tsy tsara ny miteny izany fandrao vao maika mahatezitra ny mpanaraka azy.
Manaraka izany, efa nangataka ny mpanao gazety maro mba ho ao aorian'ny mpitandro ny filaminana no hiasa, nefa dia nomarihin'ny mpitandro ny filaminana mazava tsara fa ao anatin'ny "zone à risque" hatrany ry zareo na dia izany aza. Nomena toromarika ihany koa anefa ny mpanao gazety (mbola strategie de repli ihany koa) mba hamonjy ny Hotel Colbert fa tsy hitonantonana any amin'ny toeran-kafa. Ny zavatra manaraka, efa fantatra ny anto-dianao fa haka ny lapan'Ambohitsorohitra fa tsy hoe hipetraka manoloana ny lapan'Ambohitsorohitra velively. Tohiny, rehefa novakianao ny barazy olona nataon'ny EMMO NAT teny Antaninarenina ka nanao hazakazaka ianao manatona ny lapan'Ambohitsorohitra dia efa karazan'ny nihanika fefy sahady ianao izay... na toy ny efa tafiditra anaty tokotanin'ny lapan'Ambohitsorohitra (fa inona tokoa moa ny mbola nisisihanao nanosika ny EMMO NAT izay nibahana anao tsy ho tratran'ny loza?) Efa nitarika fifanjevoana noho izany ny olona tamin'io fotoana io. Miala tsiny aho fa dia lasa mpisolovavan'ny devoly ihany koa amin'io fanazavana tsy mandresy lahatra nataoko io... nefa moa dia izay no mba takatry ny lohakeliko e!
Farany, izao (13 febroary 2009) aho vao nahatafavoaka ity lahatsoratra ity satria tsy nisy mihitsy ny connexion nandritra ny alina tokony iasako hamoahana lahatsoratra sy asa hafa (globa voices online)[efa misy ihany koa e sanatrian'izany ny fanakantsakanana?]. Alina fahatelo aho izao no misy fanelingelenana (harcelement nocturne)(amin'ny 12 alina, 2 ora, 4 ora ary @ 5 sy sasany maraina) amin'ny alalan'ny antso finday hatrany ary tsy menatra ny mampiseho ny laharan'ny findainy izy nefa rehefa antsoina tsy mamaly. Io maraina io ihany koa dia re fa nisy nitora-bato ny tranon'ny Pasitera Lala Rasendrahasina, rehefa nisy ny nanontany ny hariva izay misy ny tranony. Mitohy ny fiarovana ny ara-dalàna sy ny fanoherana ny fampihorohoroana e!
Araka ny fanampim-baovao azoko dia ny karana sy izay olona rehetra niara-niasa tamin'ny TIKO rehetra no nokasaina horobaina tany Toliary sy hovonoina mihitsy. Re ihany koa fa miomankomana ihany koa ny jiolahim-boto na mety ho mpanohana ny TGV na mpandroba tsotra handroba sy handoro izay sisa tsy potika sy tsy may tamin'ny fananan-dRavalomanana Ao Antsirabe ao amin'izao ora hanaovana fanampim-baovao izao (10:30 eo amin'ny piste fanaovana hazakazan-tsoavaly ry zalahy amin'izao fotoana izao ho an'izay mahalala an'Antsirabe). Efa nampitandrina anefa ny mpitandro ny filaminana fa hitifitra avy hatrany ry zareo na tsy "zone rouge" ary ny toerana kasain-dry zareo horobaina sy odorana.
Jentilisa, 12 febroary 2009
Nampidirin'i jentilisa | 22 Hevitra | Trackback (0) | Permalink
Mahaliana hatrany ny lahatsoratra nosoratanao.
Fa lafiny ara-panahy indray no tiako hitondrana ny famintinana. Ny Fikomiana na @'ny endriny inona na inona dia asan-devoly avokoa. Ka raha ny fanarahana ny ara-dàlana no lazaina fa asan-devoly, dia mila miverina mianatra katesizy na sekoly alahady ny mpilaza izany rehetra. Satria h@'ny Genesisy ka hatrany @'ny Apokalipsy, de tsisy teny na de iray aza ao mamporisika ny olona tsy hanara-dàlana raha misy tsy fitovian-kevitra.Amporisihin'Andriamanitra ny olona hankato ny làlan'Andriamanitra, sy ny Lalan'Olombelona.
Raha mikasika izao toe-draharaha politika izao, de tsotra sy mazava izay lazain'ny Tenin'Andriamanitra ao @'ny Romana 13/1-2 manao hoe : "Aoka isika hanaiky ny fahefana lehibe, fa ny fahefana rehetra misy de votendrin'Andriamanitra,...Fa izay manohitra ny voatendrin'Andriamanitra dia efa nandray ny fanamelohana tao aminy."
Nampidirin'i tsiafoi1 @ 08:25, 2009-02-13 [Valio]
raha ny fandinihina dia mety tsy hiafara amin'ny ady an-trano aloha raha hatamin'izao fa ahiana kosa ny adin-tsaranga satria tena ranitina mihitsy amin'izao fotoana izao eny na dia ny andaniny aza! foza orana sy ny sisa! tokony tsy hatao intsony izao fa mety hahatonga korontana. tsy maintsy hisy fifandonana mivantana ihany raha mbola mitohy izao! fa ny inoana sy andrandraina mafy dia mba ho lefy ny TGV satria efa famakiana tononkalo izao sisa no hamoriana vahoaka
Nampidirin'i Tsimiova @ 12:45, 2009-02-13 [Valio]
Are we ready for a civil war ?
... But I guess now is not a good time for that.
Nampidirin'i iNaivo @ 13:02, 2009-02-13 [Valio]
Efa ela aho no nanaraka ny lahatsoratrao (izany hoe depuis an'i TGV nanao propagande), fa hita aloha fa manohana ny fitondrana ianao,
fa hono hoa, aiza kay no tena misy lahatsoratr'olontsotra fa tsy mpanao gazety fa toy ity anao ity ihany, fa izany hoe tena olona tsy miandany @atsy na ny aroa fa tena mba milaza ny zavamisy objectivement?
Efa biaisé kely izany daholo ny vaovao rehetra hita atsy sy aroa ka tsy fantatra intsony ny tena marina.
Ny ahy izao dia mba tiako ho fantatra MARINA hoe iza marina moa ireo nanomboka nitifitra voalohany teo Ambohitsirohitra teo ? Henoko zao aloha fa hoe avy eny @Finance sy ny Tresor ireto olona no nitifitra, fa marina ve fa nokaramain'ny TGV ireo sa nokaramain'i Ravalomanana ?
- Ankoatra izay, inona marina moa no tena andrasan'i Ravalomanana tsy isamborana an'ity TGV TGV ity fa misy zavatra afenina koa ao matoa tsy sahy misambotra izy nefa ny mpanohitra azy rehetra hatramin'izay nalefa am-ponja?
Ankoatra izay misy koa ity siosion-dresaka, marina ve fa i Sarah Ravalomanana dia efa niaraka tamin'i Andry TGV ihany koa tany aloha tany? Sao resa-pianakaviana aza izy ity ?
Nampidirin'i Gasy tsotra @ 13:45, 2009-02-13 [Valio]
Miala tsiny aho raha hamaly anao hoe tsy misy olona tsy miandany izany na aiza io na aiza koa miala tsiny fa sarotra ny hamaly ny hetahetanao. Misaotra indrindra!
Nampidirin'i jentilisa @ 13:52, 2009-02-13 [Valio]
Bonjour, Dia tena variana sy gaga @izao roman nao izao(lava loatra aloa é!)Tsy mazava amiko ny tena fotonkevitrao,ra8 ve sa Andry ve sa neutre vé? ary devoly ve sa ny marina izay fisaka?Ra mandriaka tompoko no hitanay taty a lavitra,rah mbola mijoro marina ny fanjakana tokony tsy hisy ireny.Andraikitry ny ministre defense, interieur,prefet de police ary indrindra io president io no manamafy ny dispositif de securité raha ilaina,nefa dia fitofirana no hita ,Meloka io president io sy ny troupiny na inona lazain'iza na inona!tsy maintsy ho tsaraina ianareo tompoko.Ary ry Malagasy very remby Ô,mifohaza aza mijanona ho VALALA BE MANDRY mandrakariva.Misaotra Tompoko
Nampidirin'i Ranaivoson @ 21:40, 2009-02-13 [Valio]
Ny famonoan'olona tery Ambohitsorohitra no tiako asian-teny raha tsy maha diso.
Rehefa jerena ny faritra (loha, tenda, lamosina, ...) voatifitra ka nahafaty, dia toy ny niniana notifirina ho faty ilay olona. Hatramin'ny olona mandositra aza dia natao lasibatra. Amiko, dia samy tompon'andraikitra ny nampitifitra, ny nitifitra ary ireo nitarika vahoaka eny amina toerana voarara. Ny fitsarana irery ihany anefa no tokony hilaza azy.
Nampidirin'i ds @ 22:43, 2009-02-13 [Valio]
Hamaly ny fanontaniana voalaza etsy aho. Eo amin'ny lahatsoratra lava aloha dia izay mihitsy ilay fanaovako azy, efa be no niteny hoe mahamonaina, mampandositra olona ny mamaky azy... nefa mahavariana fa misy mihoatra ny arivo aza ny isan'ny mamaky ny lahatsoratra iray... koa tsy ataoko ho olana iny halavan-dahatsoratra iny. Ho ahy rahateo no tena nanoratako azy fa tsy ho an'ny hafa loatra, saingy mba zaraiko aminareo ihany ilay izy. Fa mahimahiana ihany amin'ny fitongilananao raha mahavaky ireny lahatsoratra any amin'ny madagate ireny ianao : tsy hitanao mifaninana amin'ny fanaovana lahatsoratra lava ve izahay.
Manaraka izany, raha misy ny teny hoe mpamosavy tsy mahandry ny andro alina intsony hifaliana, tsy matahotody sns ireny dia fomba filazan'ny eny amin'ny 13 mey ny olona nankeny amin'ny kianjaben'i Mahamasina ireny, ary ampahibemaso eo amin'ny sehatry ny kianjan'ny 13 mey no anambarana azy. Dia averiko soratana soa aman-tsara ho fahatsiarovana ho an'ny rehetra ny karazam-pitenenana nalaza teo amin'ny 13 mey rehefa mangingina iny raharaha. Ny hany tsy voalazako dia ny hoe voakarama, mandray vola mbola tsy nisy sonian'ny governora na hoe vola tsy mbola misy laharana ilay vola. Tena zendana aho ka nieritreritra hoe hay ve izany aty Madagasikara vao atonta ny laharana na ny sonian'ny governora e! Tsiaro fotsiny ihany ireny.
Manaraka izany, hita tsara mihitsy ireny olona voatifitra avy eny an-tampondoha ireny... fa asa raha voavakinao ny hoe ahoana ny nahavoatifitra an'i Monja Jaona sy nahafaty an'i Laha Gaston. Tsy mino aho hoe tsy nokendrena manokana ireo olona ireo. Mety ho tsy nahavaky ny lahatsoratro hatramin'ny farany ihany koa ianao tamin'ny fandinihako ny hoe mety ho lasa "bouclier humain"n'i Dolin Rasolosoa tsy fidiny i Ando satria mbola nihazakazaka ho any amin'ilay rangahy io ihany. Mazava be anefa fa efa "cible" io Jeneraly voalazako io.
Fanampiny, tsy niala andraikitra ho tsy tompon'andraikitra tamin'ny fitifirana mihitsy ny tompon'andraikitra ara-pilaminana rehetra, ankoatra ny Minisitry ny Fiarovana teo aloha Manorohanta Cecile izay tsy naharaka na inona na inona mihitsy ka naleony niala. Tsy tokony hisy antony hibosesehan'ny olona handrava ny sakana nataon'ny Emmo nat ihany koa afa-tsy noho ny fieritreretana fa tsy hahasahy hitifitra izany izany ny miaramila tahaka izay nitranga tamin'ny fandorana ny RNM sy ny TVM satria tsy nahazo alalana hitifitra ireo miaramila ireo.
Noho ny fanapahan-kevitra hentitra teo amin'ny fitondram-panjakana tsy manaiky ny hisian'ny fandrobana sy fandorana intsony no nahatonga ireny fatiolona ireny, satria tafahoatra ny nataon'ny mpanao fihetsiketsehana no maika dia maika ny hahazo sorona rahateo tariky ny TGV mba tsy hisy intsony ny olona hanaraka ny fitondram-panjakana mijoro. Nivadika taminy anefa ny tantara fa toa ny mpanohana ny "mpamono olona sy "mpamosavy" ary ny "mpivarotra tanindrazana" indray no lasa mihamaro an'isa. Asa! efa manomboka azonao ve ny fandehan'ny resaka sa mbola maizina tanteraka ihany?
Nampidirin'i jentilisa @ 07:59, 2009-02-14 [Valio]
Antony tsotra dia tsotra
Tsy dia nanoratra lava momba ny fivoriana tany Mahamasina tamin'ny 11 febroary aho, noho ny antony tsotra : alarobia ny andro, tsy maintsy niasa ny tena, ka tsy nahazo "information de première main" aho. Amin'izao fotoana izao, be loatra ny fanodikodinana ny resaka atao, ka aleoko mijanona ho "factuel" amin'izay tena fantatra, ary tsy mamoaka hevitra raha tsy efa voatsakotsako lalina.
Manameloka ireo izay mampihorohoro aho, nefa koa hitako fa tsy mahagaga raha misy olona tena tafintohina ka mitroatra, satria be ny teny tsy voalanja tato ho ato. Samy tokony handinika izay nambarany, ka hahay hiala-tsiny raha hita fa nisy tsy nety ny teny natao na lahatsoratra nosoratana.
Nampidirin'i barijaona @ 08:27, 2009-02-14 [Valio]
Dia misaotra amin'ny valinteny, fa mba te hahazo valiny momba ireo fanontaniako hafa aho raha mba azo atao. Toy izao izany :
- Iza marina moa ireo nanomboka nitifitra voalohany teo Ambohitsirohitra teo ? Henoko zao aloha fa hoe avy tery @Finance sy ny Tresor ireto olona/na miaramila no nitifitra, fa marina ve fa nokaramain'ny TGV ireo sa nokaramain'i Ravalomanana ?
- Ankoatra izay, inona marina moa no tena andrasan'i Ravalomanana tsy isamborana an'ity TGV TGV- ndoza ity fa misy zavatra afenina koa ao matoa tsy sahy misambotra izy nefa ny mpanohitra azy rehetra hatramin'izay nalefa am-ponja?
- Ankoatra izay misy koa ity siosion-dresaka, marina ve fa i Sarah Ravalomanana dia efa niaraka tamin'i Andry TGV ihany koa tany aloha tany? Sao resa-pianakaviana aza izy ity ?
Nampidirin'i Gasy tsotra @ 08:29, 2009-02-14 [Valio]
Famotorana sy fampiangana
Ilain'ny toe-javatra amin'izao fotoana izao ny famotorana tsy miankina .Ilain'ny fivoaran-tsaina malagasy,ilain'ny demokrasia sy ny tany tán-dalána.Tsy misy fa-tsy ny famotorana sy ny fitsarana izay nanao heloka ary nanome baiko hitifitra ihany no fomba hiala amin'ny ady an-trano.Raha tsy izany dia samy hanana ny fitsarana sy fampiangana ny andaniny sy ny ankilany.
Nampidirin'i democracy @ 11:40, 2009-02-14 [Valio]
TGV = terrorisme guerre violence
Tohizo ny fiampangana ny LAINGA afafiny TGV = terrorism guerre violence = tia gidra sy vono olona = toka gaina sy vounde = tequila gin vodka!
Ataovy maro mahafantatra ny misy anao sy ny ataonao, lalandava. Ny MARINA tsy maintsy mandresy.
Nampidirin'i ketabosy @ 02:11, 2009-02-15 [Valio]
inona no nahatonga ny olana
Ny zavatra tsy mety kosa aloha dia i Ravalo manafangaro ny kitampom-bolany amin'ny kitampom-panjakana : air force na ny 1 io na ny 2, famoahana lanana mahasoa sy mampitombo harena azy : detaxation, sy ny amnistie fiscale, Saika voailika daholo ny tanindrana na ny mainty amin'ny rafim-pitantanana rehetra (governemanta, tafika, masoivohom-pirenana) ary efa an-dalana hanao antoko tokana izy iny voasakan'i Andry iny. Efa betsaka anie ny nanandrana nandamina sy nitady lalana milamina, fa raha vao mitarika ianao dia voa sahala amin-dry Pety, ry Voninahitsy, ry Lecacheur, eny fa na tao amin'ny TIM toa an-dry Ranjivasona, sy ry Davidson Andriamparany aza. Raha sendra olona mizirizy izany ravalo dia izy ihany no tena antony. Izy rahateo tsy manana olona afatsy mpisolelaka sy mpitady tombontsoa manodidina azy, fa tsy misy intsony olona sahy milaza izay misy marina, hany :"faly aho ry vahoaka lava no sisa ambetin-dresany". Tsy maty havana tamin'ireny rotaka isankarazany ireny angamba aho aloha, ka sahy miteny hoe : mila sorona daholo izay tolona natao rehetra, fa hadalan'izay tsy mahatsiaro ny mirosoroso miatrika vavabasy sahala amin'ireny. Karazana voatery ihany i Andry nanao an'ireny, satria jereo ny fizirizirin-dravalo tsy hirarahara . Mivory mitady vahaolana ny atao, dia miandrasa fifidianana no ambetin-dresaky ny mpisolo tena an-dravalo. Rehefa mijery ny sarin'ny mpanohana an'i Andry aho dia toa tena irony vahoaka tena madinika ireny no eny amin'ny 13 mai, tsy mba mahatazana ireny merina fotsy protestant ireny aho, sa lasa maintin'ny fahantrana daholo ny mponin'Antananarivo?. Asa izay fifandanjan-kery any amin'ny faritany, fa raha Antananarivo aloha, mbola hitako misy hery ihany Ravalomanana. Satria na nisy olona novidiana aza, mbola be ihany izany 30 000 izany. Ny azo antoka aloha dia tsy maintsy manova famindra ravalo raha mijanona eo, tsy vitan'ny samy tsalo intsony io raharaha io raha te hitondra milamina izy. Tsy vitan'ny FJKM irery intsony koa ny raharaha.
Nampidirin'i Tsalo @ 12:21, 2009-02-15 [Valio]
Salama tsara ve ianao ry Jent a, toa tsy re intsony tato ho ato, sao dia nisy nively kobay tany klou fa itandry tgv isany ihany ny tranonao ? Aiza ny vaovao e ?
Nampidirin'i Kdaombaramita @ 18:28, 2009-02-17 [Valio]
Tena sahanao mits v n milaza izan rht izan na d taorian ny naafaty an'Itpkl Ando Ratovonirina ftsn ar?f fo toy ny inona ny ano azfd ???Maagaga iany am maa olombelona,ts voatery oe anoana an iza na anamelok an iza nef f afaafa ianao ra samy malagasy!Tongava saina
Nampidirin'i malagasiii @ 19:05, 2009-02-19 [Valio]
Anontanio ny havany ary hoe afaka nanalady tany amin'i ando ve izany Andry Rajoelina izany fa tsy nahazo roak'alika aza fady!
Nampidirin'i jentilisa @ 21:46, 2009-02-19 [Valio]
Nampidirin'i faed @ 00:31, 2009-03-10 [Valio]
Ho an'i Jentl
mialatsiny aho fa nanao fanandramana dia lasa tsinahy ilay izy. misaotra mialoha. ka izao no mba hafatro, mahatsikaritra aho fa mivaona ny resaka eto satria tsy mahatsapa intsony isika ny fiandohan'ny olana eto M/kara.Ny ampihimamba nataon'ny fitondrana no nahatonga ny fisavorovoroina, ka noho izany dia nisy sahy nitsangana afa tsy i TGV, ka dia manaraka azy ny vahoaka.
Nampidirin'i faed @ 00:40, 2009-03-10 [Valio]
mialatsiny aho fa nanao fanandramana dia lasa tsinahy ilay izy. misaotra mialoha.
Nampidirin'i faed @ 00:48, 2009-03-10 [Valio]
Za alo d leo an'ity tgv nareo ity fa tsy vitan'ny oe nanongam-panjakana fa mbola mandainga kou. Lazaina f hidina 10% ny jiro nefa nenay lasa niakatra 90% b zao. Marina f diso Ra8 saing vo mainka isika tafaitsoka @ lalina. Aza mb ory hava-manana iany e!!!!!!!!!!!
Nampidirin'i Rasoanaivo Faranirina @ 08:02, 2009-06-11 [Valio]
ecouter ampenjiky sur Radio Fahazavana
Le chef de fil de la Mouvence R8 est invité vous pouvez lui passer de coup de fil sur
+261 32 32 052 92
+ 261 33 65 401 26
Nampidirin'i ailery @ 18:58, 2009-09-05 [Valio]
Miarahaba, no anarako Walter Molina sy 1 amin'izao fotoana izao mipetraka any Knoxville, Etazonia. 1 efa kilemaina ny 5 taona noho ny aretina mafy, ary antsoina hoe myasthenia gravis maintsy nodidiana. 1 Ary nila vola be ny fandidiana, ka ny 1 dia kivy be nieritreritra hoe aiza no hahazoam-bola. 1 Nanana tahiry kely. 1 Koa niteny zanako-vavy ho hametraka ny vola ho an'ny fampiasam-bola. 1've nahita be dia be ny fijoroana vavolombelona ao amin'ny Google sy ireo haino aman-jery sosialy mikasika ny fikarohana amin'ny aterineto isaky ny manao izany aho orinasa fampiasam-bola nandritra ny fotoana ela, fa tsy nanandrana izany teo anatrehan'i, anaka nifandray ny orinasa ary nangataka fanazavana fanampiny momba ny fanatitra. Rehefa avy sonia ny antontan-taratasy ilaina izy, dia vola ny vola ao amin'ity orinasa fampiasam-bola. Fa Andriamanitra nitso-drano ahy. Izy ny isan'ny vola $ 3,000 mba $ 7.000 tombony tao anatin'ny dimy andro. Ary tamin'ny andro fahadimy, 1 dia nanontany ny fampiasam-bola ny orinasa mampiasa vola indray ny $ 7000. Ary tamin'ny andro fahadimy indray nandray $ 15000,00 mivantana nafindra ao amin'ny banky ny fampiasam-bola orinasa ... amin'ny faran'ny latsaky ny 2 herinandro fotsiny $ 3,000 Investments, 1 nanao mahasoa ny $ 15.000, 1 nanapa-kevitra ny handeha miaraka amin'ny fanampian'ny ireo fampiasam-bola 1 sy 1 nanao izay afaka nandoa ny hopitaly volavolan-dalàna. Androany 1 maraina matanjaka sy mahay, misaotra an'Andriamanitra sy tia izany orinasa sy ny 1 1 Mivavaha fa Andriamanitra dia mbola hitahy anao be dia be. Afaka mifandray orinasa mahafinaritra io amin'ny alalan'ny mailaka ity .. thompsonlewismilton@gmail.com izany ny tsara indrindra ve fahagagana izay nanjo ahy, saingy androany aho dia nomena fahafahana hiaina ny fiainana ara-dalàna indray. thompsonlewismilton@gmail.com
Nampidirin'i Walter Molina @ 19:32, 2019-04-12 [Valio]